Howlgal ka Socda Muqdisho iyo Kooxo Hubeysan oo Toogasho ku dilay Askari |
Howlgal ka Socda Muqdisho iyo Kooxo Hubeysan oo Toogasho ku dilay Askari
Iyadoo ciidamada dowladda Somalia iyo AMISOM ay howlgallo lagu sugayo amniga ka wadaan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, ayaa haddana kooxo hubeysan waxay xaafadda Sey-biyaano oo ka mid ah degmada Hodan waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya.
Howlgalka ciidamada isbahaysanaya kawadaan degmada Kaxda oo ku taalla Koonfurta fog ee Caasimadda Soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu yahay mid baahsan oo ay guri-guri ku galayaan, waxaana saraakiisha hoggaaminay ay u sheegeen warbaahinta inuu qayb ka yahay qorshaha lagu adkeynayo amniga caasimadda Soomaaliya.
Dadka degmada qaarkood ayaa iyaguna warbaahinta u sheegay in baarista socda ay saameyn xooggan ku yeelatay dhaq-dhaqaaqa gancsiga iyo kan gaadiidka degmada. Lana xiray dhammaan waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Kaxda.
“Boqolaal qof oo dhallinyaro u badan ayaa lasoo dhoobay barxado waaweyn oo xaafadaha degmada ku yaalla, kuwaasoo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab,” ayuu yiri mid ka mid ah dadka degmadaas ku nool.
Sidoo kale, wararka hay’adaha amniga dowladda laga helayo ayaa sheegaya in baaritaankan uu ku yimid, kaddib markii ay heleen xogo sheegaya inay ku soo dhuuntaan degmada xoogag ka tirsan Al-shabaab xilliyada habeenkii ah.
Dhinaca kale, kooxo hubeysan oo wata gaari ayaa saaka aroortii hore dil u geystay askari ilaalo ka hayay suuq ku dhow dhismaha Say-biyaano oo ku yaalla degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Kooxaha hubeysan ee dilka geystay iyo askariga ayaa la sheegay inay qadar dagaalama-yeen, balse ugu dambeyn la dilay askariga, ayna kooxaha dilkaas geystay goobta ka baxsadeen markiiba.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiro hadal kasoo baxay hay’adaha amniga oo ku saabsan dilka skarigan loogu geystay saakay xaafadda Say-biyaano, iyadoo xaaladda amni ee xaafadahaas la sheegay inay ahaayeen maalmihii dambe kuwo aan wanaagsanayn.